5ta Ugu Danbeysa ee Maaraynta Hantida Dijital ah (DAM) Oo Dhacaya 2021 | Martech Zone
U guuritaanka 2021, waxaa jira horumar qaar ka dhacaya Digital Hantida Management (Dam) warshadaha.
Sanadkii 2020 waxaan goob joog u nahay isbadal balaaran oo ku yimid caadooyinka shaqada iyo dabeecadaha macaamiisha sababtuna tahay covid-19. Sida laga soo xigtay Deloitte, tirada dadka ka shaqeeya guryaha ayaa laban laabmay Switzerland intii lagu jiray aafada. Waxa kale oo jira sabab loo aamino in dhibaatadu sababi doonto a kororka joogtada ah ee shaqada fog ee heer caalami ah. McKinsey sidoo kale wuxuu ka warbixiyaa macaamiisha riixaya kororka adeegyada dijitaalka ah ama geeddi-socodka iibsiga, si aad u ballaadhan oo 2020 ka badan sidii hore, saamaynaya labada shirkadood ee B2B iyo B2C.
Sababahan iyo kuwa kale awgood, waxaan ku bilaabaynaa 2021 aasaas gabi ahaanba ka duwan sidii aan filaynay sanad ka hor. In kasta oo dijitalisnimadu ay ahayd isbeddel socda dhowr sano hadda, waxaa jira sababo laga filan karo in baahida loo qabo ay sii kici doonto sannadka soo socda. Oo dad badan oo meel fog ka shaqeeya - iyo alaabooyin iyo adeegyo lagu iibsanayo laguna qabanayo khadka tooska ah ee heerka sare ah - waxaan fileynaa inaan aragno koror muuqda oo ku saabsan tirada hantida dijitaalka ah iyo baahida loo qabo in la taageero software-ka. Sidaa darteed, waa shaki yar in Barnaamijka Maareynta Hantida ee Dijital ah waxay u noqon doontaa barxad shaqo oo muhiim u ah ganacsiyada iyo ururada badan sanadka soo socda.
Maqaalkan, waxaan si dhow u eegi doonnaa waxa 2021 ku keydsan dhufto ee Maareynta Hantida Dijitaalka ah waxaanna qori doonnaa 5ta isbeddel ee ugu sarreysa ee aan aaminsanahay inay noqon doonaan kuwa ugu caansan sannadkan.
Isbeddellada 1: Dhaqdhaqaaqa iyo Maareynta Hantida Dijital ah
Haddii 2020 ay na bartay hal shay, waxay ahayd muhiimadda ay leedahay caadooyinka shaqada ee firfircoon. Inaad karti u leedahay inaad ka shaqeyso meel fog iyo iyada oo loo marayo aalado kala duwan, waxay ka soo noqotay faa'iido ahaan iyo baahi daruuriga u ah ganacsiyada iyo ururada badan.
In kasta oo barnaamijyada DAM ay dadka iyo ururrada ka caawinayeen inay meel fog ka shaqeeyaan muddo dheer, waa macquul in la aamino in bixiyeyaasha softiweerku ay fududeyn doonaan shaqo firfircoon oo heer sare ah. Tan waxaa ka mid ah hagaajinta dhowr waxyaalood oo DAM ah, sida adeegsiga aaladaha moobiilka iyadoo loo marayo barnaamijyada ama fududeynta keydinta daruuriga ah iyadoo loo marayo barnaamijka Adeegga (SaaS).
At FotoWare, waxaan horeyba u bilownay diyaarinta macaamiisha doonaya dhaqdhaqaaqa weyn. Marka lagu daro kordhinta diiradeena SaaS, waxaan sidoo kale bilownay barnaamij cusub oo moobiil ah bishii Ogosto ee 2020, taasoo u saamaxaysa kooxaha inay helaan oo ay u isticmaalaan DAM markay socdaan iyada oo loo marayo aaladooda moobaylka.
Isbedelka 2aad: Maareynta Xuquuqda iyo Foomamka Ogolaanshaha
Tan iyo markii sharciyada EU GDPR ay dhaqan galeen 2018, waxaa jiray baahi sii kordheysa oo loo qabo ganacsiyada iyo ururada si ay ula socdaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo ogolaanshahooda. Hase yeeshe, qofku wuxuu heli karaa ururo dhowr ah oo la halgamaya sidii ay u heli lahaayeen habab ay ugu hoggaansamaan xeerarkan si hufan.
Sanadkii la soo dhaafay waxaan ka caawinnay dad badan oo isticmaala DAM inay qaabeeyaan qulqulka shaqada si ay u xalliyaan arrimaha ku habboon GDPR, tanina waa inay noqotaa mid si weyn diirada u saareysa sanadka 2021 sidoo kale. Iyada oo ay jiraan ururo badan oo mudnaanta siinaya maareynta xuquuqda iyo GDPR, waxaan aaminsanahay foomamka ogolaanshaha inay meel sare kaga jiraan liistada doonista daneeyayaal badan.
30% dadka isticmaala DAM waxay u arkeen maaraynta xuquuqda sawirka mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn.
Iyadoo la adeegsanayo foomamka oggolaanshaha dhijitaalka ah, tani waa inay ahaataa mid shaqeynaya awood ka weyn, ma aha oo keliya xagga maaraynta GDPR, laakiin dhowr nooc oo xuquuqda sawirrada ah.
Isbedelka 3: Isdhexgalka Maareynta Hantida Dijital ah
Hawsha aasaasiga ah ee DAM waa in la badbaadiyo waqti iyo dadaal. Isdhexgalka ayaa markaa muhiim u ah guusha DAM, maadaama ay awood u siinayaan shaqaalaha inay si toos ah hantida ugala soo baxaan barxada markay ka shaqeynayaan barnaamijyada kale, kuwaas oo inbadan ay waxbadan qabtaan.
Noocyada waxqabadka sarreeya ayaa ka guuraya xalka hal-iibiyayaasha ah, iyagoo mudnaanta siinaya bixiyeyaasha software-ka madax-bannaan halkii.
Shaki la'aan waxaa jira faa iidooyin badan oo ah xulashada iyo xulashada softiweerka halkii aad ugu xirnaan lahayd hal ama laba iibiye. Si kastaba ha noqotee, isku-darka saxda ah waa inuu jiraa si shirkadaha ay uga faa'iideystaan ​​barnaamijyadooda madax-bannaan. APIs iyo plugins ayaa markaa ah maalgashi muhiim u ah bixiye kasta oo softiweer ah oo doonaya inuu sii ahaado mid muhiim ah oo sii wadi doona inuu ahaado mid muhiim ah ilaa 2021.
FotoWare, waxaan ku ogaaneynaa kuweena plugins loogu talagalay Adobe Creative Cloud iyo Microsoft Office inaad si gaar ah caan ugu tahay suuqleyda, iyo sidoo kale isku xirnaanta nidaamka PIM ee ururka ama CMS. Tani waa sababta oo ah suuqleyda badankood waa inay adeegsadaan hanti kala duwan barnaamijyo iyo barnaamijyo kala duwan. Haysashada isku dhafka goobta, waxaan tirtiri karnaa baahida loo qabo inaan si joogto ah u soo degsano oo aan u soo rarno faylasha.
Isbeddellada 4: Sirdoonka Artificial (AI) iyo Maareynta Hantida Dijital ah
Mid ka mid ah howlaha waqtiga badan qaadanaya marka aad la shaqeyneyso DAM waxay ku saabsan tahay ku darista metadata. Iyadoo la hirgelinayo AIs - loona suurtogelinayo inay la wareegaan hawshan - kharashyada waqtiga la xiriira waa la jari karaa xitaa intaa ka sii badan. Illaa iyo hadda, dad aad u yar oo isticmaala DAM ayaa ka faa'iideysanaya tikniyoolajiyadan.
Sida laga soo xigtay Cilmi-baarista warshadaha FotoWare laga bilaabo 2020:
Kaliya 6% ee isticmaalayaasha DAM ayaa horeyba maalgashi ugu sameeyay AI. Si kastaba ha noqotee, 100% ayaa qorsheynaya inay hirgeliyaan mustaqbalka, taas oo keeni doonta inay kordhiyaan qiimaha DAM.
75% ma hayaan wakhti cayiman oo la xushay goorta ay hirgalintani dhici doonto, iyagoo soo jeedinaya inay sugi karaan tiknoolajiyadda inay sii horumariso, ama laga yaabo inayna ka warqabin fursadaha hadda ka jira suuqa.
Isku-darka iibiyaha-saddexaad iyo AI-bixiyaha, Imagga, ayaa horeyba looga heli jiray FotoWare, waxaan aaminsanahay in isku dhafka noocan oo kale ah uu kordhin doono uun caannimada. Gaar ahaan maadaama AIs ay si joogto ah u soo hagaagayaan oo ay si joogto ah u awoodi doonaan inay aqoonsadaan maaddooyin badan markii waqtigu socdo, iyo inay tan ku sameeyaan si faahfaahsan.
Illaa iyo hadda, way aqoonsan karaan oo ay ku calaamadin karaan sawirrada midabbada saxda ah, laakiin horumariyayaashu wali waxay ka shaqeynayaan sidii ay u aqoonsan lahaayeen farshaxanka, taas oo noqon doonta muuqaal ku habboon matxafyada iyo qolalka. Waxay sidoo kale aqoonsan karaan wajiyada si heer sare ah marxaladan, laakiin xoogaa horumar ah ayaa wali ku jira shaqooyinka, tusaale ahaan markii la adeegsanayo wejiga wajiga, oo kaliya wajiyada qaybo ka mid ah la arki karo.
Isbeddellada 5: Teknolojiyada Blockchain iyo Maareynta Hantida Dijital ah
Isbeddelkeenna shanaad ee 2021 waa tiknoolajiyadda xannibaadda. Tani maahan oo kaliya sababtoo ah kor u kaca bitcoins, halkaas oo ay lagama maarmaan u tahay si loola socdo horumarka iyo macaamil ganacsi, laakiin sababtoo ah waxaan aaminsanahay in tikniyoolajiyadda ay caan ku noqon karto meelaha kale mustaqbalka dhow, DAM ayaa ka mid ah iyaga.
Adoo fulinaya xannibaadaha loogu talagalay barnaamijyada 'DAM', dadka isticmaala waxay heli karaan xitaa xakameyn ballaaran hantidooda, iyagoo raadraacaya isbeddel kasta oo lagu sameeyo feyl. Qiyaas ka balaaran, tani waxay - waqti kadib-ku-awoodsiin kartaa dadka inay, tusaale ahaan, ogaadaan in sawir la fara-xumeeyay ama in macluumaadkeedii ku-meel-gaarka ahaa la beddelay.
Maareynta Hantida Dijital ah si isdaba-joog ah ayey isu beddelaysaa, oo FotoWare waxaan ku dadaalnaa sida ugu fiican ee aan ula soconno isbeddellada. Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato annaga iyo waxa aan bixin karno, waxaad ballansan kartaa kulan aan loo baahnayn oo lala yeesho mid ka mid ah khubaradayada:
Ballanso kulan aad la yeelanayso Khabiirada Foto-DAM
Tags: adobe cloud Cloudaisirdoonka macmalblockchaintechnology blockchainfoomamka ogolaanshahaxidheenkaisku xidhka biyo xidheenkabarnaamijka biyo xireenkaisbeddellada biyo xireenkadeloittemaaraynta hantida dijitaalka ahisku dhafka maaraynta hantida dijitaalka ahbarnaamijka maaraynta hantida digitalisbeddelada maaraynta hantida dijitaalka ahsawirGDPRsawirMcKinseyMicrosoft OfficePimmaareynta xuquuqdaisbeddellada tikniyoolajiyaddaisbeddellada